शिक्षकलाई बिद्यालय बोलाएर आफूहरु घरमा बस्दै कुश्मा नगरपालिकाका कर्मचारी - tajanews24
शिक्षकलाई बिद्यालय बोलाएर आफूहरु घरमा बस्दै कुश्मा नगरपालिकाका कर्मचारी
पर्वत, भदौ १५ । आईतबार पर्वतको कुस्मा नगरपालिकाले ‘समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिएको कारण नगरपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालहरुबाट प्रदान गरिने सेवाहरु बन्द’ भन्दै सूचना जारी ग¥यो । नगरपालिकाको सूचनाले जिल्लाबासीलाई नै तरंगित बनाईदियो । कारण थियो समुदायमा कोरोना नै नपुगेको अवस्थामा नगरपालिकाको कार्यालय जस्तो जिम्मेवार निकायले समुदायमा कोरोना फैलिएको भन्दै सेवा बन्द गरिदियो । कुस्माबजारको शिबालयचोक स्थित एक फेन्सी पसलका परिवारका सदस्यमा पोखरामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । भदौ २ गते कुस्मा आई ९ गते पोखरा फर्केका ती युवामा संक्रमण पुष्टि भएपछि उनको घर परिवार र छिमेकमा संक्रमण भएको आशंका मात्रै गरिएको हो ।
यही अवस्थामा नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले भने शिक्षकहरु अनिवार्य रुपमा विद्यालयमा उपस्थित भएको हुनुपर्ने नभएमा उनीहरुमाथि शाखाले कुनै न कुनै प्रकारको कारबाही गर्ने मौखिक रुपमा बताइरहेको छ । समुदायमा कोरोना संक्रमण नहुँदै डरका कारण कार्यालय बन्द गरेर बन्द कोठामा सुरक्षित बसिरहेका कर्मचारीले भने शिक्षकहरुलाई विद्यालयमा जान ताकेता गरिरहेका छन् । नाम उल्लेख नगरिदिने शर्तमा एक जना शिक्षकले भर्चुअल बैठकमा र बाहिर पनि शिक्षा शाखाका कर्मचारीले शिक्षकहरु विद्यालयमा गएर हाजिर गरेको हुनुपर्ने बताएको जानकारी दिए ।
‘समुदायमा कोरोना नै नगएको अवस्थामा नगरपालिकाको कार्यालयले सेवा बन्द गराउने यो कस्तो खालको मञ्चन हो? ५ जनाले काम गर्ने ठाउँमा २ जना कर्मचारी मात्रै आएर भएपनि नगरपालिकाले सेवा दिनुपर्ने हो की नाई ?’ ती शिक्षक भन्छन्, ‘नगरपालिकाका कर्मचारीलाई बाँच्नुपर्ने, कोरोनासँग डर लाग्ने, अनि शिक्षकहरु भने विद्यालयमा भेला हुने? शिक्षककै कारण समुदायमा संक्रमण पुग्यो भने त्यसको जिम्मेवारी शिक्षकलाई विद्यालयमा जान बाध्य पार्नेहरुले लिने की नलिने ?’ यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले भने केही दिन अगाडि नै सूचना निकालेर विद्यालयमा जमघट नगर्न तर सकेसम्म अनलाईन कक्षाहरुलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको थियो । प्रशासन कार्यालयले दिएको निर्देशन बिपरित नगर शिक्षा शाखाले भने विद्यालयमा शिक्षकलाई विद्यालयमा जानै पर्ने बताउँदा जिल्लाको शिक्षा क्षेत्र तरंगित बनेको छ । यो अवस्थामा शिक्षकहरु विद्यालय जान मिल्छ की मिल्दैन भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा डिसिसिएमसीका संयोजक शम्भुप्रसाद रेग्मीलाई प्रश्न गर्दा उनले अहिलेको अवस्थामा विश्वकै शिक्षा जगत तहसनहस भएकोले शिक्षकलाई विद्यालयमा जाने बाध्यतामा पार्न नहुने बताउँछन् ।
स्रोतका अनुसार शिक्षकहरु लामो समयसम्म घरमा बसेर तलब पाएको तर कर्मचारी भने हरेक दिन कार्यालयमा जान परेको भन्दै नगरपालिकाका कतिपय कर्मचारीले कुरा उठाएका थिए । शिक्षक घरमै बसेको अवस्थामा आफूहरु पनि सोह्र श्राद्ध गर्नका लागि घरमा जानुपर्ने भएकोले यो अवस्थामा नगरपालिकाका सेवा बन्द गरिदिए हुने भनी कर्मचारीले बताएको स्रोतको दावी छ । ‘हामीले एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा सवारी आउजाउ गर्न नदिने की ? भनेर छलफल गर्न लागिरहेका छौँ । यस्तो अवस्थामा अब शिक्षकलाई विद्यालयमा भेला भउ भनेर कसरी भन्ने ?’ उनले भने, ‘शिक्षा सम्बद्ध निकाय, विद्यालय प्रशासन र शिक्षकहरुले सकेसम्म अनलाईन मार्फत नै सिकाईमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । सहजीकरणको बारेमा मन्त्रालयले पनि निर्देशीका जारी गरिसकेको छ ।’
कुस्मा नगरपालिकाले कोरोना समुदायमा पुगेको भनी आधिकारीक रुपमा पत्र सार्वजनिक गरेको अवस्थामा डिसिसिएमसीका सदस्य तथा पर्वत अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा. शिशिर देवकोटोले भने पर्वतमा हालसम्मको अवस्थामा समुदायमा कोरोना नपुगेको भनी पुष्टि गरेका छन् । उनले समुदायमा कोरोना पुगेको प्रमाणित हुनलाई केही मापदण्डहरु तोकिएको तर पर्वतमा ती मापदण्ड पूरा नभएको जानकारी दिए ।
‘अहिले नै समुदायमा संक्रमण गएको भन्न सकिने आधार छैन् । यसका न्युनतम मापदण्ड पुरा भएको हुनुपर्छ ।,’ उनले भने, ‘अहिले सम्म प्राप्त भएका परिक्षणका रिर्पोट र अस्पतालमा बिरामीको अबस्थाका कारण समुदायमा गएको अबस्था छैन । बाहिर अनावश्यक रुपमा हल्लाहरु फैलिँदा आम नागरिक हतोत्साही बन्ने र उनीहरुको प्रतिरक्षा प्रणाली नै डरका कारण कमजोर बन्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ । यसमा सबैले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’
नरोत्तम वैद्यको अभिव्यक्ति प्रति युवासंघ…
अन्तराष्ट्रिय पर्बत समाजको पहलमा पर्बतमा…
काँग्रेसका युवा नेता सुवेदीको पहलमा…